'L'Imparfait du Subjonctif': I-Literary Literary Time
Indlela yokusebenzisa iFransi engaphelelanga yokuBambisana ngokuBhala ngokuBhaliweyo
IsiFulentshi esingenasiphelo se-subjonctif (" ukungathobeli ukuthobela") yindlela yokubhala ebhaliweyo esetyenziselwa ukubhalwa ngokusemthethweni, njengencwadi, udaba lweendaba, kunye neembali zeembali kunye neengxelo. Njengazo zonke izenzi zengqondo zentshukumo, ufuna ngokwenene ukuba uyayiqonda, ungayisebenzisi.
I-impunfait du subjonctif yenye yeelwimi ezintlanu zesiFrentshi. Ziye zanyamalala ngolwimi oluthethiweyo, ngaphandle kokuba isithethi sifune ukuzwakala i-erudite.
Zonke iilwimi zesihlanu zesiFrentshi ziquka:
P assé elula
I-Passé ant ri rieur
I-Plus-que-parfait du subjonctif
Isiqendu se-du conditional passé
Imizekelo yeFrench engaphelelanga
Ukuthobela ukungafezeki kusetyenziswe kwisigatshana esingaphantsi xa igatya eliphambili lidlulileyo. Ukulingana nokungabhalwanga kwamanye amazwe kukuzimela ngoku .
Inxenye ye-intanethi ye-e-mail yethu. > Washiya ukuze sibe nekamelo lethu.
Ukungafani kwamanye amazwe: Usukele ngaphandle kokuba u-ayon le salle à nous-mêmes.
Ndiyavuma ukuba i-parlât à son frère. > Ndifuna ukuba akhulume nomzalwana wakhe.
Ukungalingani kwamanye amazwe: Ndiyayifuna ukuba uthethe ku-frère wakhe.
Ndiyazi ukuba ufile. > Ndiyesaba ukuba ufile.
Ukungalingani kwamanye amazwe: Ndiyazi ukuba uyafa.
Uhambo lwaye luhamba luya kuluhlu lwe-argent. > Wahamba nangona wayenayo imali.
Ukulingana kwamanye amazwe: I -voyagé quoiqu'elle has not had eu argent.
Indlela yokudibanisa isiFulentshi esingapheliyo soLwazi lweNcwadi
Ukudibanisa kwesiFrentshi ukungalingani kwe-subjonctif kusekelwe kwisiFrentshi passé elula ("idlulileyo elidlulileyo"), eyaziwa ngokuba yi "preterite" okanye i- passé defini ("idlulileyo"). I-Passé elula yinto efana neyombhalo wemihla ngemihla ye- passé compé, kwaye, njengokungapheleli kokungafezeki, isetyenziswe ngokubanzi ekubhaliseni okusemthethweni njengencwadi, udaba lweendaba kunye neembali zembali.
1) Kuzo zonke- izenzi , kuquka izenzi ezitshintshayo kunye nesenzo esingaqhelekanga sokuhamba , thatha umntu wesithathu ungowomntu oyedwa wendlela elula efana nesigxina kwaye ungeze iziphelo ezingaphelelanga. Qaphela ukuba isipelingi-utshintshe izenzi ezifana nomkhombe kunye ne- lancer zineenkcenkceshela zabo zokupeliswa kuzo zonke ezi zinto.
2) Kuba -zizenzi , izenzi , kunye nezenzi ezingavumelekanga, ukuzithoba kokungafezeki kuboniswa ngolu hlobo lulandelayo: umntu wesithathu unobumba obuncinane we- passé elula ngaphandle kokuphela kokuzimela.
Ngezantsi zingapheli ngokugqibeleleyo ekupheleni kokuzimela kunye nokuqhawula:
i-verbs parler ("ukuthetha"), i- manger ("ukutya"), i- lancer ("ukuphosa"), kwaye uhambe ("ukuya");
iilwimi eziqhelekileyo-kunye nezenzi-mali ("ukugqiba") kwaye uguqule ("ukubuyela") ngokulandelanayo;
kwaye izenzi ezingaqhelekanga zibe ("ukuba nazo") kunye nendawo ("iza").
Iingcamango ezibonakalisiweyo zeNgqungquthela engaphelelanga yesiFrentshi
umfundisi yokutya lancer ukuhamba
Umntu wesithathu wedwa udlulileyo il parla il mangea il lança il alla
ukungapheleli kokuthobela iprogram mangea- lança- uku-
... que je -sse parlasse mangeasse lançasse i-allasse
... que tu -ses iiplasi iimangali lançasses iillasses
... - ^ t parlât mangeât lançât zonke
... que nous -ssions parlassions mangeassions lançassions i-allassions
... ba -ssent elide mangeassent i-lançassent allassent
gqibela guqula ukuba indawo
Umntu wesithathu wedwa udlulileyo iphelile il rendit u yavuma il vint
ukungapheleli kokuthobela ku gqibela i-rendi i-EU- iwayini
... que je -sse gqibile i-rendisse ikhefu vinsse
... que tu -ses gqibela i-rendisses ikhupha vinsses
... - ^ t gqibela ivelise eût vînt
... que nous -ssions kuphelisa iifayile ekoka izivini
... que vous -ssiez finissiez i-rendissiez eussiez vinssiez
... ba -ssent iphelile zivelise phambili ivenkile
Ixesha elide lokubhala
I-passé ant ant ri riary
I-Seconde ifom ye-conditionnel idlulileyo
I-Combattre: Ukulwa okanye ukulwa
Funda NgeziFrentshi Izibonakalisi Zontetho
IiProjekthi zeSayensi zeBakala lokuqala
I-Economics of Price Gouging
2017 I-Chrysler Pacifica Limited Test Drive kunye noVavanyo
Izipho eziPhambili zezoPolotiki
Andiqiniseki Yintoni Oyenzayo Emva kokuthembisa? Zama enye yalezi 11 Iingcamango